သာကောခြေစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်း ရမည် ( သို့ ) လုပ်ပွဲကစားနေသော ရှီနဂါး – Na Pann San
သာကောခြေစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်း ရမည် ( သို့ ) လုပ်ပွဲကစားနေသော ရှီနဂါး
ဟောင်လွန်းတဲ့ခွေး လူမလေး ….” သာကောခြေစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်းရမည် (သို့) လုပ်ပွဲကစားနေသော ရှီနဂါး ”
ရှီကျင့်ပင် က ဒီကကောင်တွေ လိုပဲ အိမ်ကျယ်အဆင့်ရယ်….
စတုန်းကစပြီး ခေါ်ဖဲ ရှိုးနေတော့ တက်မလာဘူး အနှဲဘက်က ပြောပြီးသား သာကော‌ကောင်တွေ ဒီတခါ ရန်လာစရင် ပစ်လိုကပစ် သတ်လို က သတ်နိုင်ပြီလို့ ပြောထားတဲ့ နေ့ကစပြီး ရူးယောင်ဆောင်သွား လိုက်တာများ အိန္ဒိယဘက်က ကုန်သွယ် စီးဆင်းမှုတွေပါ ဖြတ်တောက် ပိတ်ခံရတဲ့ အထိ နာကျင် သွားတယ်
ဒီလိုဆို သာကော ဘာကြောင့် အရှုံးခံပြီး လုပ်ရသလဲ အဖြေက ရှင်း ပါတယ် ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် US ကိုတောင် အံ့တုချင်နေတဲ့ သာကောဟာ နိုင်ငံရေး ကစားမှု အပြင် အရှိန်အဝါ ကို တက်အောင် လုပ်ပြနေတဲ့ သဘောပါပဲ ကစားနည်းနဲ့ ပြောရရင် ဗိုလ်လုပွဲကို မရောက်ခင် ဆီမီးအသင်း နဲ့ ကန်ကြည့်နေတဲ့ သဘောပါ ‌ခြေစမ်း အားစမ်း‌နေတဲ့ သဘော
သို့ပေမယ့် သူကန်တာက အယောင်ပြကန်ပြီး ဒိုင်ပင်ထိုး ပင်နယ်တီယူ ညစ်ပြီး လုပ်ပွဲ ကန်သွင်း ကစားဖို့ အကွက်ဖော်ထားပြီး ကစားပြီး ဖိုင်နယ်အသင်း ကို တက် ဖိုက်ချင်တာ
သူ အဲလို ကစားဖို့ ကစား ကွက်ဖော်ပြီး တည်ထားတော့ ကမ္ဘာက အံ့ဩသွားပြီး ဖြေးဖြေးလုပ်ကြပါ တို့ ဆွေးနွေးကြပါအုံး တို့ အထင်ကြီးသူကကြီး လန့်သူကလန့်နဲ့ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံငယ်လေးတွေက ကြောက်လန့်ကုန်ကြပြီး သူ့အောက်ပဲ ၀င် ရမလား US ပဲ ပြေးခိုရမလား ဘယ်သူ့အားကိုး ရမှန်းမသိနဲ့ အခြေနေကို စောင့်ကြည့်နေကြရတယ် ခြံခွထိုင်မည့် ဒ်ီကကောင်တွေ လို သူတွေကလည်း တပုံကြီး သူ့လက်အောက်ခံ နဲ့ ကြွေးမှီနိုင်ငံတွေဆို ပိုဆိုးပေါ့
နောက် သူ တည်ကစား ရမည့် သူကလည်း သူနဲ့ လယ်ဗယ်တူသူ မှ ဖြစ်မှာ အားအင်နည်း တယ် ဆိုရင် အနိုင်ကျင့်တယ် ဆိုပြီး ကမ္ဘာက ဖိနှိပ်ခံနိုင်ငံဘက်ကနေ ပိုပါဝင်လာပြီး ၀န်းရံကူညြီကမှာ ဆိုတော့
သူနဲ့ နီးနားက ပြိုင်ဘက်တူ လယ်ဘယ်တူ ရန်ဘက် ရှိသူ နောက် သူ့အကျိုး ကို လုဖဲ့ယူနေတဲ့သူ ဆိုလို့ အနှဲကြီးပဲ ရှိ တာဆိုလို့ ဝေးလံနိုင်ငံကလည်း သူအနိုင်ကျင့်ဖြဲရမည့်သူကမရှိ ရှိလည်း အပင်ပန်း နဲ့ ငွေကုန်ကြေးကျမခံလိုဆိုတော့ အဝေးမသွားမကန်လိုပဲ နီးနားပဲ ခြေစမ်း ကိုင်ကစားမယ် ဆိုပြီး စတည်းချလိုက်တာ
ခု တဖက် အသင်းကလည်း ခေသူမဟုတ် ဘရားဇီးနဲ့ မတွေ့မီ ဆီမီး မှာ စပိန်နဲ့ အာဂျင်တီးနား တွေ့နေသလို ကန်နေသလို ဖြစ်နေတော့ ကန်ရ ကိုင်ရ ကစားရခက်နေပြီး သာကော ကစားကွက်ဖော် ဖို့ အကြပ်တွေ့နေတယ် ခုမှ ဆုတ်လည်းရူး စားလည်းရူး နဲ့ ဟန်ပြ ကြောက်အောင်ဖြဲ‌ခြောက်ထားတာ ကမ္ဘာက ရှိန်အောင် ဟန့်ထားတာ ပြည်တွင်းအရေး မသိ ဖုံးဖိ အာရုံလွှဲထားချင်လို့ ဖော်ထား တဲ့ ကစားကွက်ဆိုတော့ ‌နောက်ဆုတ်ရင်လည်း အရှက်က ကွဲအုံးမယ် ရှေ့တိုးရင်လည်း အနှဲက နွှာတော့မယ်ဆိုတော့ ဗိုလ်ကျပြီး ဗိုလ်လုပွဲတက်ချင်တဲ့ကောင် ဆီမ်ီးမှာတင် ချေချော်ပြီး တစ်နေပြီ
ဒါကြောင့် သေချာ ပါတယ် လာလိမ့်မယ် မကြာဘူး ဒီပွဲဟာ ချစ်ကြည်ရေး ကစားပွဲ ကန်သွင်း‌နေကြတာ ဆိုပြီး မဟုတ်လည်း အနှဲဖက်ကနေ အားပေးပြီး ရွှေဂိုးသွင်းပေးမည့် အသင်းတွေက အများကြီး ၀န်းရံ အားပေးနေကြတာ ဆိုတော့ သာကောလုပ်ပွဲ ဟန်ရေးပြ ကန်နေတာကို အိပ်ရေးပျက်ခံ ကြည့်နေရတာ မတန်ဘူး ထင်ပါတယ် ဗျာ
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ သာကော နဲ့ ရွှေဘတွေဟာ အကျင့်တူ စရိုက်တူ အိမ်ကျယ်ဘူတွေဆိုတော့ နှစ်ကောင်လုံးက ကြက်မတွေပဲ ရမလားလ့်ို ဖင်ဆီပူးခါကြည့်တာ ဒီကောင်‌တွေသောက်ကြောင်း ကမ္ဘာကလည်း သိနေပြီ ဒါကြောင့် အဖက်မလုပ်ပဲ လှည့်မကြည့်တာကို အိမ်ထဲဝင်ခိုးမည့် သူခိုးလို ခြံစည်းရိုးနားပဲ ရစ်သီရစ်သီ လာ လုပ်နေကြတော့
သာကော ရွှေဘတို့ ခြေစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်းရမည် ဆိုတာ ကိုယ့်အိမ် မှာပဲ ချိတ်ထားတဲ့ ” သတိ ခွေးရှ်ိသည် ” ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လိုပါပဲ
ခွေးဘယ်မှာ လဲ ကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ်တိုင် တဝုတ်ဝုတ် နဲ့ အူဟောင်နေတယ် ခြံစည်ရိုးအပြင်ဘက် မထွက်ရဲပဲ ….
ကျောက်ဖြူ အထူး စီးပွားရေးဇုန် ရေနက် ဆိပ်ကမ်း ကုမ္ပဏီ အား အစိုးရ က ခွင့်ပြု လိုက်ကြောင်း တရုတ်သတင်းဌာန ဖော်ပြ
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း လူမှောင်ခိုများ ကားပေါ်တွင် တာလပတ်ဖြင့်အုပ်ကာ ခိုးသွင်းလာသော အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား (၁၁) ဦး အဖမ်းခံရပြန်
၂၇-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက် ၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း